Kitra – «Arabe cup U20»: resin’ny Barea de Madagascar i Djibouti | NewsMada
Kitra – «Arabe cup U20»: resin’ny Barea de Madagascar i Djibouti
Tsara fanombohana ny Barea de Madagascar, teo amin’ny andro voalohany amin’ny fifanintsanana, hiadiana ny amboara “Arabe cup U20”. Fifaninanana, tanterahina any Arabia Saodita. Resin’ny Barea, tamin’ny isa tery, 4 no ho 3, i Djibouti. Fihaonana, notanterahina omaly alatsinainy, tao amin’ny kianja Riadh.
Raha ny fizotran’ny fihaonana, efa nitarika tamin’ny isa 2 no ho 0 ry zareo Djibouti vao nanenjika ny Malagasy ka nihoarany mihitsy izany, teo am-pialan-tsasatra, nisaraka tamin’ny isa, 4 no ho 2. Samy nampiditra baolina roa avy i Arnaud sy i Ricardo, ho an’ny Barea de Madagascar.
Nanindry, ry zareo Djibouti, teo amin’ny fizaram-potoana faharoa. Tsy nanaiky izy ireo raha tsy nahatafiditra baolina fahatelo. Niezaka nanafika ihany koa ny Barea, taorian’izay saingy tsy nety nahafaty baolina intsony. Manana isa telo izany ny Barea de Madagascar, taorian’ity lalao vitany ity. Hifandona amin’i Barhein ny Barea, ny alakamisy 20 febroary ho avy izao, ary hikatroka amin’i Maraoka kosa ny alahady 23 febroary ho avy izao. Tsiahivina fa ao amin’ny saokajy faharoa no misy ny Barea, amin’ity fihaonana ity. Tafakatra amin’ny lalao manasa-dalana ireo ekipa roa voalohany isam-bondrona.